ဗိုလ်တထောင် စေတီတော် လုံးတော်ပြည့် ရွှေသင်္ကန်း ကပ်လှူသည့် လုပ်ငန်းများ မိုးကာလအတွင်း ခေတ္တ ရပ? - Yangon Media Group
မိုးရွာသွန်းသော ကြောင့် ရွှေသင်္ကန်းကပ်ရန်အခက်အခဲရှိသဖြင့် ဗိုလ်တထောင်ကျိုက် ဒေးအပ်ဆံတော်ဦးစေတီတော်ကြီး၏ လုံးတော်ပြည့်ရွှေသင်္ကန်းကပ်လှူသည့်လုပ်ငန်းများကို ခေတ္တရပ်နားမည်ဖြစ်ပြီး ပွင့်လင်းရာသီ ရောက်မှ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဗိုလ်တ ထောင်ဂေါပကအဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။
လုံးတော်ပြည့်ရွှေသင်္ကန်းကပ်လှူခြင်းလုပ်ငန်းများကိုစတင် လုပ်ဆောင်ထားပြီဖြစ်ပြီး ဇွန်လမိုးရာသီတွင်ခဏရပ်နားကာ နိုဝင်ဘာနှင့် ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည်ဟုသိရသည်။ ”လောလောဆယ်ဘက်စုံပြု ပြင်မွမ်းမံတွေလုပ်ဆောင်နေပြီ။ လုံးတော်ပြည့်ရွှေသင်္ကန်းကပ်လှူတာကို ကျပ်သိန်းပေါင်း ၂ဝဝဝဝ လောက်အကုန်အကျခံပြီးဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ ဇွန်လမှာ တော့ခဏနားမယ်။ မိုးရာသီမှာ တော့မိုးရွာတဲ့အတွက် ရွှေသင်္ကန်းကပ်လို့မရလို့ခဏနားပါမယ်။ မိုး အကုန် နိုဝင်ဘာ၊ ဒီဇင်ဘာလ လောက်မှာ ပြန်လည်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အလှူရှင်များ အနေနဲ့လည်း ရွှေသင်္ကန်းကပ်လှူ ဖို့လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်”ဟု ဗိုလ်တ ထောင်ဂေါပကအဖွဲ့ဝင် ဦးရဲမြင့်က ဇွန် ၄ ရက်က ဒီမိုကရေစီတူ ဒေးသို့ ပြောသည်။
ဗိုလ်တထောင်ကျိုက်ဒေး အပ်ဆံတော်ဦးစေတီတော်ကြီးတွင် လက်ရှိအချိန်တွင်ရွှေသင်္ကန်း ကပ်လှူသည့်လုပ်ငန်းမှာ ရာခိုင်နှုန်း ၄ဝ ခန့်ပြီးစီးပြီဖြစ်ပြီး ဒီဇင်ဘာလတွင် ကျန်ရာခိုင်နှုန်း ၆ဝ ကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ”ရွှေသင်္ကန်းကပ်နေတာက တော့ ၄ဝ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပြီးပြီ။ ကျန်တာတွေတော့ နိုဝင်ဘာလမှာ မသိုးသင်္ကန်းကပ်လှူပွဲရှိတဲ့အတွက် ဒီဇင်ဘာလလောက်မှာ ဆက်လက်ကပ်လှူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ၎င်းကဆက်လက်ပြောသည်။ ဗိုလ်တထောင်စေတီတော် ဘက်စုံပြုပြင်မွမ်းမံရေးလုပ်ငန်းများကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန် ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း ဦးဆောင်မှုဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး (မြို့တော်ဝန်) ဦးမောင်မောင်စိုးနှင့် ဗိုလ်တထောင်စေတီတော်ဂေါပကအဖွဲ့တို့မှ အလှူရှင်များ၏ လှူဒါန်းမှုများဖြင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ရိုးရာမပျက် ရွာတော်ရှင် ဘိုးဘိုးကြီး ဝက်သားဖြုန်းစပ် နတ်တင်ပွဲ စတင်ကျင်းပ
အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့် အနုပညာတက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်)၏ ငွေရတုအကြိုပွဲတော်တွင် ပိုင်းလော့ဓမ္မစကူ?
သီတင်းကျွတ်ကာလ အဝေးပြေးယာဉ်လိုင်း လက်မှတ်ဝယ်ယူရာတွင် အခက်အခဲရှိသူများအား တိုင်းယာဉ်ကြီး?